Ogaden News Agency (ONA) – Muqdisho: Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Federaalka ee Soomaliya oo ka badbaadiey dil
Muqdisho: Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Federaalka ee Soomaliya oo ka badbaadiey dil
Qarax iyo rasaas is-xigta ayaa laga maqley degmada Hodan ee magaalada Muqdisho, waxaana wararka ka soo baxayaaa sheegayaan in la weeraray guri uu deganaa Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Federaalka, sida uu warbaahinta u xaqiijiyey sarkaal ka tirsan Dowladda.
Weerarka waxaa dhaawac ka soo gaarey ugu yaraan afar qof oo ku sugnaa guriga Xildhibaan Aadam Ibraahim Dhaayow, kadib markii bombaanooyin lagu weeraray guriga kadibna waxaa rasaas ku jawaabey ilaaladii Xildhibaanka, waxaana ku dhaawacmey afar qof oo ka mid ahaa dadkii guriga ku sugnaa.
Afhayeenka Gobolka Banaadir Cabdifataax Xalane ayaa warbaahinta u sheegay in kooxda weerartey guriga Xildhibaanka ay wateen laba Mooto kadibna markii ay bombaanooyinka tuureen ay baxsadeen, waxaana uu sheegay in ay ku raad joogaan oo soo qabanayaan kuwa weerarka geystey.
Taliyaha Saldhigga Booliska degmada Hodan ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in weerarkan uu ka badbaadey Xildhibaan Aadam Dhaayow.
Ma jirto ilaa hadda cid la qabtey oo weerarka geysatey iyo cid shegatey in ay masuul ka yihiin weerarkan.